ညီလင်းသစ်: ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်ကြသူများ
Posted by ညီလင်းသစ် au 9.3.11
ဟိုးးးးး လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်ကျော်ကထဲက ပိုစ့်တိုင်းကို နှစ်ခြိုက်စွာ ဖတ်ဖြစ်ကြောင်းပါ။
ဒီပိုစ့်မှာ ကိုယ့်အကြောင်းမပါသော်လည်း ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ဖတ်သွားပါတယ်ရှင့်။ :))
ça me fait rire quand j'ai lu de"သူငယ်ချင်းတွေနှင့် ထမင်းစားသည့်အခါ". Merci pour ce post et en même temps, je te remercie de ton amitié.
၀င်ရိုးစွန်းကိုမသွားခင်စဉ်းစားတယ်။ အချိန်ပေးနုိုင်ပါ့မလားလို့ ။ ခုတော့အိပ်ချိန်တွေလည်းဖဲ့ဖဲ့ပေးရလို့အိပ်ရေးတွေလည်းမ၀။ အိပ်ရေးပျက်ပေမဲ့ ပျော်နေတော့တော်သေးတာပေါ့နော်။ မမြင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းတိုးဆိုတော့.... ဆက်ပျော်မိနေဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ ကုိုယ်လိုလူတွေအများကြီးဆိုပြီးကုိုယ့်ကုိုကုိုယ်လည်းအားပေးရသေးတယ်။ သူများတွေလည်းလျှောက်လည်နေကြတုန်ဆိုပြီး :D
ဘလော့ရေးရင်းနဲ့ တစ်ခါမှ မမြင်ဘူးသူနဲ့ သိရတယ်။ ဖုန်းပြောဖြစ်ဖူးတယ်။ အပြင်မှာ ထမင်းအတူစားဖူးတယ်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ၀င်ရိုးစွန်းက ရေခဲတောင်တွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွယ်ထိတွေ့ရသလိုပဲ။
ဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာ အဲဒီလိုရေခဲတောင် ၄ခုတွေ့ဘို့တောင်ချိန်းထားသေးတယ်။
ဟုတ်တယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ ဘလော့ဂ်ရူး ရူးနေတာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အစစ်နဲ့တောင် အဆက်ပြတ်နေပြီ....
အလှူအိမ်သွားသွား၊ မင်္ဂလာဆောင်သွားသွား ဘယ်သူ့မျက်နှာမှ မကြည့်ဘဲ တဝိုင်းလုံးက စားသောက်ဖွယ်ရာတွေကို လှည့်ပတ်ဓါတ်ပုံ ရိုက်မိ ပြန်သည်၊
ဘုရား ဘုရား.....အဲဒီအတိုင်းပဲ အဲဒီအတိုင်းပဲ၊ ဒီစာထဲမှာ ရေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်ရောဂါတွေက အမမှာလည်း တော်တော်များများ ရှိနေတယ်ဟ...:)
ချစ်စရာ စာစုလေးပဲ ကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ် အစ်ကို ကျနော်လည်း ဒီဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်နေတာကြာပေါ့ သူနဲ့ဘယ်လောက်ပဲဝေးသွားဝေးသွား သူ့ကိုအမြဲသတိရနေတတ်တယ် ။ မမြင်ဖူး မတွေ့ဖူး ကြပေမယ့် စိတ်ထဲက လေးနက်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေဖြစ်မိတာလည်း ကိုယ်တိုင်ကလွဲ ဘယ်သူမှသိနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး ။ စာအသစ်ကလေးများ မတက်လာရင် နေမှကောင်းရဲ့လားမသိ အဆင်ကောပြေရဲ့လားမသိ စိတ်ညစ်စရာတွေများရှိနေလားမသိဆိုတဲ့ တွေးပူစိတ်တွေကလည်း ကိုယ့်ပါသာတောင် ကိုယ်မသိလိုက်ပဲ အလိုလိုဝင်ရောက်လာတာမျိုးပါ ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဝန်းကျင်လေးမှာ ကျင်လည်နေရတာပျော်တယ် အပြင်မှာမပြောဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရာမျိုးတွေကိုတောင် ဒီနေရာလေးမှာကျ ရင်ဖွင့်ချင်တယ် ငါ့အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက အကြံညဏ်လေးများ အားပေးစကားလေးများ မျှော်လင့်မိရင်းပေါ့ ။ ဒီနေ့တော့ ဘာလေးရေးရင်ကောင်းမလဲတွေးရင် မြင်မြင်သမျှ အရာတွေကိုလည်း စာပဲရေးချင်နေမိတော့တာပဲဗျို့း)
ကြုံတုန်းပြောအုံးမယ် အစ်ကိုရေ ကိုယ်တွေ့ ၀င်ရိုးစွန်မှာနေကြသူများ အပြင်မှာ တကယ်ဆုံတဲ့အခါကျလည်း အံ့သြဖို့ကောင်းလောက်အောင်စကားတွေက ပြောမကုန် တကယ့်ပဲ ငယ်ပေါင်းကြီးတွေကိုဖြစ်လို့ အပြင်ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ဘလော့ကခင်တဲ့သူကို အပြင်မှာဘာလုပ်ဖို့တွေ့မှာတုန်း သေချာလည်းမသိပဲနဲ့လို့ပြောဖူးတယ် ။ နောက်တော့ သူပါလိုက်လာရင် ပါးစပ်ပိတ်သွားရတဲ့အဖြစ် အစ်ကိုတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကိုဆုံးမစကားတွေဆိုရင်း ၀င်ရိုးစွန်းချစ်ခြင်းတွေကို ပြသွားလိုက်တာ ၁ နာရီလောက်ကြာသွားတယ် ။ သူမှတ်ချက်ချလိုက်တာက ဘလော့ဂါ ဆိုတာ တော်တော်စကားများတဲ့ အမျိုးပဲတဲ့း) အပြင်မှာမရနိုင်တဲ့ သူငယ်ချင်းမျိုးတွေ ညီနောင်သံယောဇဉ်တွေကို ဒီနေရာလေးက ရနေတာကိုလည်း ပျော်တယ် ။
နောင်များလည်း ၀င်ရိုးစွန်းမှာ ခပ်ညံ့ညံ့ ရေခဲရုပ်များကို ထုဆစ်နေမိအုံးမှာပါ ။
ညနေပိုင်း အင်္ကျီနှင့် လုံချည် ၀တ်သူး)
အဟုတ်ပဲ ကိုညီလင်းသစ်ရေ ... ၀င်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်ကြတာနော်။ ခုလိုရေးပေးတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ်ရကောင်းမှန်းသိတော့တယ်။
မဟုတ်ရင် ဘလော့ရူးရူးနေတာကို အိမ်ကတချိန်လုံး ပြောစရာဖြစ်လွန်းလို့။
ထစ်ခနဲဆို ဘလော့ပေါ်တင် ကမ္ဘာဖြန့်နေတာတဲ့ ... :)
ဘယ်တတ်နိုင်မလဲနော် ... ၀ါသနာကိုး ...
ကိုညီလင်း ရေးထားတဲ့ ပို့စ်လေးက သိပ် ချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ။ "ထိုသူတို့ ကတော့ ဝင်ရိုးစွန်း ဒေသမှာပဲ ရေခဲတောင်တွေကို ဆက်လက် ထုဆစ်ဖို့ ကြိုးပမ်း နေဆဲ ရှိတော့သည်၊ စင်စစ် သူတို့သည် ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်ကြသူများ ဖြစ်ပါသည်" ဒီ စာသားလေး အနှစ်သက်ဆုံးပဲ။
ရို့စ် ဘလော့ဂ် စရေးတာ လပိုင်းပဲ ရှိသေးပေမယ့် ကိုယ့်ဆီ လာလည်တဲ့ စာဖတ် ပရိသတ်က သောင်းကျော် ဆိုတော့ အရမ်း ပျော်တာ။ အဲ့လို စာဖတ်သူတွေ လာလည်လို့ ရအောင် ရို့စ် ဘလော့ဂ် လိပ်စာလေးကို ချိတ်ပေးတဲ့ စီနီယာ ဘလော့ဂ်ဂါ အစ်ကို အစ်မတွေကို ရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ပြီးတော့ မနက် မိုးလင်းရင် ကွန်ပြူတာ ဖွင့်ပြီး ကိုယ့် ဘလော့ဂ်လေးမှာ ဘယ်နိုင်ငံက လူတွေ လာလည် သွားလဲ၊ ဘယ်သူတွေ ကွန်မန့် ရေးသွားလဲ၊ စီဘောက်စ်မှာ တစ်ယောက်ယောက် ရေးသွားလား ဆိုတာ ကြည့်ရတာ အမော။ စိတ်ချမ်းသာတယ်။ ကိုယ်က ၀တ္ထု ရေးရ တာလည်း ၀ါသနာ ပါတော့ ရို့စ် အတွက် ၀တ္ထုလေးတွေ ရေးဖို့ နေရာ တစ်နေရာ ရသွားတာပေါ့။
အခုလည်း ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ ဝန်းရိုးစွန်းက ရေခဲတောင်တစ်ခုက သူ့ဆီလာဖို့ ဆွဲဆောင်နေတာ မဟုတ်လား.. ပြော :P
ကျွန်မဆိုရင် ပထမ တစ်ခေါက်ဝင်လာတယ်.. စာပိုဒ်ကိုအရင်ကြည့်တယ်..မဖတ်သေးဘူးနှော်.. ဟူး.ရှည်တယ်..အလုပ်လုပ်ရမှာမို့..နေ့လည်မှဖတ်မယ်စဉ်းစားတယ်..အောက်ဆုံးကစာကြောင်းကိုဖတ်မိတယ်..အလဲ့ တယ်လဲစွဲဆောင်ပါလား.. နေပါဦးလေ..နောက်မှတခေါက်ပြန်လာမယ်.. စာမျက်နှာပေါ်မှ အမြန်ဆုံးခွာတယ်..အလုပ်ထဲကို အာရုံစိုက်ဖို့စဉ်းစားတယ်..
မနေနိုင်တော့ဘူး.. ဖတ်ချင်လာတယ်..နောက်တခေါက်ပြန်လာမိတယ်.. အစအဆုံးဖတ်တယ်..တချို့နေရာမှ ပြုံးတယ်..ထချို့နေရာမှ စိတ်ထဲမှခေါင်းငြိမ့်တယ်..
နောက်ဆုံးတော့ ဟောဒီက ကွန့်မန့်ပါ ရေးမိသွားတယ်.. အဲဒီရေခဲတောင်က တော်တော်ဆွဲဆောင်တာကိုးနှော်.. ရေမျက်နှာပြင်အောက်ပိုင်းမှာ ထုထည်ကြီးမားပုံရတယ် :D
ဘယ့်နှယ် ကိုယ့်အကြောင်း မပါရမှာလဲ၊ ဘလော့ဂို စဖီးယားထဲက ညီမတစ်ယောက်ပဲဟာ..၊ ၁၀၀% သက်ဆိုင်ပါတယ်ဗျာ..။ ခင်မင်မှု ထုထည်က ကြီးတာနဲ့အမျှ တခါတလေမှာ အသေးစိတ် အချက်လေးတွေဟာ အရေးမပါလှတော့ပါဘူး..နော၊း)
En effet, tu as bien relevé la phrase que je voulais te rendre attentive... :)
သိပ်သေချာတာပေါ့၊ လည်တာတော့ လည်ကြတုန်းပဲဗျ၊ အိပ်စက်ခြင်းတွေနဲ့ကို လဲလှယ်ပြီးတော့လေ....
သိပ်ကံကောင်းတာပေါ့၊ ကျနော်တော့ အခုထိ ဘယ်ရေခဲတောင်ကိုမှ မကိုင်တွယ် မထိတွေ့...အဲ..မဆုံဖူးသေးဘူး၊း)
ကျနော်တို့တွေတော့ အားလုံး ရောဂါတူပဲ ထင်ပါရဲ့ဗျာ၊ ဒီစိတ်နဲ့သွား၊ ဒီစိတ်နဲ့စား၊ ဒီစိတ်နဲ့ပဲ ရှင်သန်နေမိ...း)
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အမှန်သဘောခင်တဲ့ သံယောဇဉ်တွေကို ပြန်ပြောရင်တောင် ကြားရသူက ဟန်သဘောလို့ ထင်မိမှာ အသေအချာပါ၊ အချင်းချင်းတွေသာ သိကြတဲ့ ကိစ္စမျိုးပဲ ထင်တယ်နော်...၊း) ခင်မင်မှု အုတ်မြစ်ပေါ်မှာ တည်ထားတဲ့ ရေခဲရုပ်တွေကို ချစ်သောမျက်စိနဲ့ ကြည့်တဲ့အခါ ကောင်းတယ်၊ ညံ့တယ်လို့ မမြင်မိပါဘူး ညီရာ...၊ ;-)
အစစ်ပါပဲဗျာ၊ ဝါသနာကို မတားကြနဲ့ လို့ပဲ ပြောရတော့ မယ်နဲ့ တူပါရဲ့နော်...၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအကြောင်းလည်း ကမ္ဘာက သိကုန်ကြပြီ...၊း)
ဟုတ်ပါတယ်၊ မနေ့က ကိုယ်ထုဆစ်လိုက်တဲ့ ရေခဲတောင်ထွတ်လေးပေါ်မှာ ဒီနေ့ ပင်ဂွင်းတွေ လာလည်တာ တွေ့ရင်၊ ပိုလာဝက်ဝံတွေ တက်လာတာ တွေ့ရင် အင်မတန် ကြည်နူးစရာ ကောင်းတာပေါ့..၊း)
ရေခဲတောင်ကို လာတဲ့နည်းက ကန္တာရထဲက ရွက်ဖျင်တဲထဲကို ကုလားအုတ်ဝင်တဲ့နည်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ပါလား..ဟားဟား၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီး က ပူနွေးလာပြီး ဝင်ရိုးစွန်းက ရေခဲတောင်တွေ အရည်ပျော်ကြတာဟာ အိုဇုန်းလွှာတွေ ပေါက်နေလို့ ဆိုတာထက် ဝင်ရိုးစွန်းမှာ နေကြသူများရဲ့ အပြန်အလှန် ထားရှိတဲ့ ခင်မင်မှုတွေ နွေးထွေးလွန်းလို့ ပဲလို့ ကျနော်တော့ ယုံကြည်ချင်မိတာပါပဲဗျာ...။ =)
ဘလော့ကတဆင့် အတွေ့ အကြုံသစ်တွေ၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေ အများကြီး ရလာတာ။
လာပြန်ပြီ ၀င်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်တဲ့ သူတစ်ယောက်.. မနက်ကတည်းက လာဖတ်ပြီးပြီ။ အပြင်သွားစရာပေါ်လာလို့ ထွက်သွားလိုက်ရတာ
ခရီးသွားတော့လည်း တစ်လမ်းလုံး တွေ့ကရာ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ သူများတွေက ဘာလုပ်တာလဲတဲ့..
စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေပါ မကျန်ရိုက်တာ ကားသမားတောင် လန့်လာတယ် ဟားဟား
၀င်ရိုးစွန်းပျော်သူအချင်းချင်းမှ ဒီခံစားချက်ကို နားလည်နိုင်မှာလေနော့
သာမာန်လူတွေ ဘယ်သိပါ့မလဲ။ ကိုယ်တွေက သာမန်လူတွေမှ မဟုတ်တာဘဲလေ
၀င်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်ကြသူတွေလေ..း)
အင်း တနေ့တနေ့ဘလော့ မဖတ်ရရင် နေမကောင်းချင် သလိုလို ဟာနေသလိုလို နောက်နေ့အချိန်လု ဖတ်ရ တယ်။
You forgot to mention about blog readers.
"မ ဖတ် ၇င်မနေနိင်တာကလွဲလို."...........:D
Sing like Htun eaindra Bo's song.....
ညီမကတော့ ဘလော့ဖတ်ရင်းနဲ့စွဲသွားပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်ပြီး အချိန်တွေ ကုန်လွန်းပေမယ့် မဖြတ်နိုင်ဘူး။ ဘလော့ဂါတွေနဲ့လဲ မသိ ကွန်မန့်လဲ မပေးဖြစ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ထဲအထိတောင် မက်ယူပြီး စိတ်မကောင်းစရာဆိုလဲ စိတ်မကောင်းတွေဖြစ်၊ ဘလော့ပိတ်ပြီး ပြန်တော့မယ်လို့ မ၀ါဝါခိုင်မင်းပြောတုန်းက (၂-၃)ရက်လောက် သူ့ကို အိပ်မက်တွေမက်ယူရော။ အခုစာတွေပိလာတဲ့အချိန်ကျတော့ လျှော့တော့မယ် စိတ်ကူးပေမယ့် အခုအချိန်အထိမရသေးဘူး။ ကိုညီလင်းသစ်ရဲ့ဘလော့ကျတော့ ကိုအင်န်ဒီလိုပဲ စာရေးကောင်းလို့ရယ် သားလေးချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းလို့ရယ် အမြဲလာကြည့် နေဖြစ်တယ်။
ဝင်ရိုးစွန်းပျော်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာထားပြီးသား၊ ဝမ်းသာပါသဗျ...၊း)
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘလော့ဂ်ကရတဲ့ ခင်မင်ခြင်းတွေက တကယ်ပဲ အဖိုးတန်ပါတယ်..၊
နေပြည်တော် ဆဖာရီမှာ ခြင်္သေ့မကြောက်ဘဲ ကားပြူတင်းပေါက်က လက်ထုတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက် ကတည်းက အက်စကီးမိုး တစ်ယောက်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီဗျာ...ဟားဟား၊
ဟုတ်ပါရဲ့..၊ နေ့စဉ်မှီဝဲတဲ့ သက်ရှည်ကျန်းမာဆေး တော့ ဖြစ်နေပြီနော်...၊
I didn't forget. The readers are like polar bears who go around on the icegergs. So, it should beaseparate post, lol. :D
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖတ်စရာ ကြည့်စရာတွေ အများကြီး ရှိရဲ့သားနဲ့ ဘလော့ဂ်ဖတ်တာကလည်း တကယ်ပဲ စွဲသွားတတ်တယ်နော်၊
ဟုတ်တယ်ဗျာ၊ ရေးသူရော ဖတ်သူပါ အချိန်တွေ အများကြီး ပေးကြရပေမယ့် ဝါသနာ ပါနေကြတော့ လည်း ပျော်နေကြတာပဲ ထင်ပါရဲ့..။
ပိုချစ်စရာကောင်းတာက "လွမ်းမောဖွယ်ရာ စာသင်နှစ်တွေဆီ ပြန်လည် လွမ်းဆွတ်နေတတ်သည့် မဟုတ်မခံ ဆရာမလေးတစ်ယောက်" က အမဖြစ်ရင်ပေါ့ :P ဒါပေမဲ့ ဆရာမ လေးဆိုတော့ သပ်မနီးစပ်ဘူးရယ်.. ဟိဟိ.. ဒီက ၅၀နားနီးဆိုတော့ :D
ဒီပို့စ်လေးကို သဘောကျတယ်...။ ရေခဲတောင်ဆိုပေမယ့် ရင်ထဲမှာနွေးနွေးထွေးထွေးခံစားရတယ်....။ ရေးထားတာတွေကတော့ အမှန်တွေချည်း... ဟဲဟဲ..။
မပျောက်တော့မည့်သူ (မကြာခင်လို့တော့ ထင်ရပါသည်)
လတ်ဆတ်နုသစ်တဲ့ မြသီလာ စာသင်နှစ်တွေကို သတိရတိုင်း စိတ်အစဉ်က နုပျိုနေမှာပဲ မဟုတ်လား အမရယ်၊ စိတ်ပျိုတော့ ကိုယ်နုတယ်လို့လည်း ဆိုကြတယ်လေ၊ ဒါဆိုရင် 'ဆရာမလေး' ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ မနီးစပ်စရာအကြောင်း မရှိတော့ပါဘူး...၊း)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ မကြာခင်လို့ ထင်နေတဲ့ အထင်လေး လည်း မှန်ပါစေလို့...။ :D
ဆက်လက်ထုဆစ် ကြိုးပမ်းမယ့် အနုပညာလက်ရာကောင်းလေးတွေကို ဆက်လက်စောင့်မျှော် ဖတ်ရှုအားပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ခင်မင်သောစိတ်ဖြင့် မှတ်ချက်ရေးသွားသည် ။
ခင်မင်သောစိတ်ဖြင့် ရေးသောမှတ်ချက်ကို ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဖြင့် လက်ခံပါသည်...။း)
အတွေးလေးကောင်းတယ်... ရူးတော့ရူးနေတာပါဘဲ... ဒါပေမဲ့ သူများကို မထိခိုက်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကျေနပ်အောင်နေတတ်တဲ့ ဘလော့ရူးပါ.... :D
ဟုတ်တယ်ဗျို့၊ ကျနော်တို့ အားလုံးက ခပ်ယဉ်ယဉ်လေး တွေပဲနော်...။း)
၀င်ရိုးစွန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေချနေတဲ့ နှင်းလူကြီးတစ်ကောင်ကလည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လာဖတ်သွားပါတယ်။ ရေခဲတောင်တွေထုဆစ်နေခိုက် နှင်းမုန်တိုင်းတွေကြားရုန်းကန်ရင်း ပူနွေးလာတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကိုလည်း အံတုရင်း။ :)
အဲဒီ နှင်းလူကြီးကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ၊ သူက ဒိုင်နိုဆောတွေ မပျောက်ကွယ်ခင်ထဲက ဟောဒီ ဝင်ရိုးစွန်းမှာ ပျော်နေခဲ့တဲ့ နှင်းလူကြီး မဟုတ်လား..၊း)